के भारतको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ नक्कली थियो ? - inaruwaonline.com
के भारतको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ नक्कली थियो ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन १९, २०७३ समय: ३:०६:४५
नयाँ दिल्ली / भारत–पाकिस्तानको सीमाको लाइन अफ कन्ट्रोल पार गरेर भारतीय सेनाले गरेको भनिएको सर्जिकल स्ट्राइकलबारे भारतकै नेताहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यसअघि पाकिस्तानले भारतले दाबी गरेको सर्जिकल स्ट्राइक झुठो भएको बताइरहँदा पछिल्लो समय भारतीय नेताहरुले नै त्यसमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि भारत–पाकिस्तानको सीमामा कुनै कारवाही नभएको बताएको छ । बिबिसीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समेत भारतले दाबी गरेको पाकिस्तानको भूमिमा सर्जिकल स्ट्राइक भएको स्पष्ट प्रमाण नदेखेको रिर्पोट सार्वजनिक गरेको थियो ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सर्जिकल स्ट्राइकको भिडियो देखाउन माग गरेपछि पाकिस्तानी मिडियाले उनको यस भनाईको समर्थन गरेको छ । पाकिस्तानी पत्रिका द ट्रिब्युनले एक रिर्पोट प्रकाशित गर्दै केजरीवालले एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाएको बताएको छ । त्यस्तै समा टिभीले पनि भारतीय नेताहरुले मोदीसँग जवाफ माग्न थालेको बताएको छ । यता, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (विजेपी) का नेताहरुले भने केजरीवालको भनाईप्रति अपत्ति प्रकट गरेका छन् । विजेपी नेता रविशंकर प्रसादले भने, ‘केजरीलालाई भारतीय सेनाको बहादुरीप्रति भरोस छ या छैन ?’
केजरीवालले भने, ‘बिजेपी किन उत्तेजित भएको ?’
विजेपीले आफूमाथि प्रश्न तेर्साएपछि केजरीवालले भने, ‘पहिला मेरो पूरा भिडियो हेर्नुहोस् । मैले प्रधानमन्त्रीलाई सल्युट गरेको छु । समर्थन गरेको छु । सेनालाई बधाई दिएको छु ।’
‘हामी सबैलाई थाहा छ कि पाकिस्तान झुटो प्रचार गर्दैछ । विश्वका सबै पत्रिकाले पनि यही भन्दैछ कि सर्जिकल स्ट्राइक भएकै छैन,’ उनले भने, ‘यस्तोमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई पाकिस्तानको झुठो प्रचारको कडा जवाफ दिनुपर्छ भनेर अपिल गरेको हुँ । यसमा हामी उनलाई साथ दिन्छौं । यो विषयमा म कुनै राजनीति गरेको छैन । पाकिस्तानलाई जवाफ दिनुपर्छ भन्दा बिजेपी किन यति उत्तेजित भएको छ ?’
के भन्छन् कांग्रेसी नेता ?
कांग्रेस नेता संजय निरुपमले भने, ‘हरेक भारतीय पाकिस्तानको विरुद्धमा सर्जिकल स्ट्राइक होस् भन्ने चाहन्छ । तर, फर्जी होइन । जसरी अहिलेको विजेपी सरकार आफ्नो फाइदाको लागि भन्दैछ ।’
त्यस्तै अर्का नेता दिग्विजय सिंहले भने, ‘हामीलाई सेनामाथि पूर्ण भरोसा छ । मोदी गुजराजको मुख्य मन्त्री हुँदा देखि हामी माथि आक्रमण गर्ने गरेका थिए । तर, हामीले पहिलो दिननै उनलाई समर्थन गर्यौं । पाकिस्तान विश्वभरको पत्रकारलाई त्यहाँ लगेर सर्जिकल स्ट्राइक नभएको भन्दैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि त्यही भन्दैछ । हाम्रो सेनाको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्दैछ भने सरकारले यसको प्रमाण दिनुपर्छ ।
पाकिस्तानी मिडिया के भन्छ ?
द एक्सप्रेस ट्रिब्युनले लेखेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले भारतको सर्जिकल स्ट्राइकमाथि प्रश्न उठाएपछि अहिले भारतमा पनि यसमाथि प्रश्न उठ्न लागेको छ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले पनि प्रधानमन्त्री मोदीसँग सर्जिकल स्ट्राइकको प्रमाण माग गरेका छन् ।’
जिओ न्युज लेख्छ, ‘भारतका नेताहरुले आफ्नो सर्जिकल स्ट्राइकको दाबीलाई झुठो भएको बताएका छन् ।’
केजरीवालको बयानप्रति ट्वीटरमा विरोध भइरहेको छ । यतिबेला ट्वीटरमा #KejriwalWithHafeez ट्रेन्डिङ भइरहेको छ । रातोपाटीबाट
इनरुवाका बैंकर्सले गरे सासुको बिरोध
बैंकर्स क्लब इनरुवाले सामाजिक सुरक्षा योजना (सासु) को बिरोध गरेको छ । इनरुवाको बसचोकमा भेला भएका बैंकर्स क्लबमा आवद्ध कर...
सप्तकोशी नदीको वहाव यस वर्षकै उच्च
सुनसरी। सप्तकोशी नदीको वहाव यस वर्षकै उच्च मापन भएको छ । पछिल्लो मापन अनुसार कोशी नदीमा पानीको वहाव २ लाख ३१ हजार ६ सय ५...